Madaxweyne Qoorqoor Oo Saxiixay Miisaaniyadda 2020-ka waxaa is weedin mudan halkoo ka helay lacagtaas – Damqo
Madaxweyne Qoorqoor Oo Saxiixay Miisaaniyadda 2020-ka waxaa is weedin mudan halkoo ka helay lacagtaas
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi kaariye “Qoorqoor” ayaa saxiixay miisaaniyadda dowlad goboleedka Galmudug ee sanadka 2020-ka kaddib markii ay meelmariyeen golaha wasiirrada iyo mudanayaasha Baarlamanka labaad ee Galmudug.
Miisaaniyada cusub ee Galmudug ayaa gaareysa 17,230,054.00 ( todobo iyo toban malyan, laba boqol iyo soddan kun, iyo konton iyo afar doolar) , miisaaniyadan ayaana ka badan tii sanadkii hore oo aheyd 8-Milyan oo Dollar.
Munaasabaddii uu madaxweyne “Qoor Qoor” ku saxiixay miisaaniyadda waxaa goob joog ka ahaa Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, Guddoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaano ka tirsan maamulkaasi oo uu madaxweynuhu xalay casho sharaf mahadcelin ah u sameeyay.
Miisaaniyadda Galmudug waxaa horey u meel-mariyay golaha wasiirrada iyo mudanayaasha Baarlamanka maamulkaas, iyadoo ugu dambeynti Madaxweyne “Qoorqoor” xalay uu ku saxiixay Magaalada Dhuusamareeb., isla Xalayana waxa uu casho Sharaf u sameeyay Xildhibaanada Galmudug.
Previous *Madaxweyne Farmaajo iyo Maalinta Oktoobar* oo ka fashilantay asagoo rabay in oo xusso Ogtobar
Next Farmaajo oo rabo in abtirsiina ummadda Soomaalyeed in oo ka dhigo Itobiyaan.